ဟာဇက်ကို ဆက်ထိန်းထားရန် တစ်ပတ်ပေါင် သုံးသိန်းဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးရန် ချဲလ်ဆီး ကမ်းလှ? - Yangon Media Group
ဟာဇက်ကို ဆက်ထိန်းထားရန် တစ်ပတ်ပေါင် သုံးသိန်းဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးရန် ချဲလ်ဆီး ကမ်းလှ?
ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် ကွင်းလယ်လူဟာဇက်ကို အသင်းတွင် ဆက်ထိန်းနိုင်ရန်အတွက် တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၃ သိန်းဖြင့် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဟာဇက်သည် နွေရာသီ ဈေးကွက်အတွင်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီး ယခုအချိန်ထိ ချဲလ်ဆီးအသင်း၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို သဘောတူညီခြင်းမရှိ သေးပေ။
ဟာဇက်၏ လက်ရှိစာချုပ်မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းနှင့် ၂ နှစ်ကျန် ရှိနေပြီး ယခုအပြောင်းအရွှေ့မပိတ်မီပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်းမရှိပါက လာမည့်အပြောင်းအရွှေ့တွင်ပြောင်း ရွှေ့ဖွယ်ရှိနေသည်။ ထွက်ပေါ်နေသည့်အသင်းများအရမူ ဟာဇက်သည် ယခုရာသီတွင် ချဲလ်ဆီးအသင်း၌သာ ဆက်ကစားမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်သစ်ကိစ္စမှာ ရာသီအကုန်၌ ချဲလ်ဆီးအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲမှသာသ ဘောတူဖွယ်ရှိနေသည်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် ဟာဇက်အပြင် ကွင်းလယ်လူ ကန်တီကို ပါစာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။ ကန်တီသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ပြင်သစ်အသင်းအတွက် အထူးခြေ စွမ်းပြကာ ကမ္ဘာ့ဖလားရယူပေးနိုင် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက စိတ်ဝင်စားနေသည်။
ကစားသမားများ၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှုအပေါ် လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာဂင်ကလော့ပ် ချီးကျူး
အနိုင်ရခဲ့သင့်သော်လည်း စိတ်အေးအေးထားရန် မက်ဆီ တိုက်တွန်း